Maryam - Wikipedia
Haku khaldin Miryama bintu Cimraan oo ah Nebi Muuse walaashiis.
Kani waa maqaal ku saabsan Maqaalkani waa Nebi Ciise hooyodii, magac ahaan fiiri Magaca Maryam. adeegsi kale, eeg Maryam (faah faahin).
Maryam bintu Cimraan (Af Ingiriis : Mary, "Mariam"; Reer aw xasan waa beel kamid ah‎; loo qoro: Marīam, loogu dhawaaqo: "Mariyam"; hooyo u ah: ﻧﺒﻲ ﻋﻴﺴﻰ; "Nebi Ciise"; ama: يسوع, loogu dhawaaqo "yasuuca") waxay ahayd qof muuminad ah oo dhashay isla markaana hooyo u ahayd nebigii Alle u soo direy reer [Israaiil|[banii Israaiil]] waa Nebi Ciise (c.s). Markey taariikhdu ahayd qiyaastii 20 sano C.H (Dhalashaddii Ciise Horteed) ayaa Maryama ku dhalatey magaalada Baytulaxam ee ku taala dhulka ay Falastiiniyiintu degaan, waxay isla magaaladani ku dhimatey markey taariikhdu ahayd qiyaastii 100 ilaa 120 sano C.D. Maryama waa qofta dumar kali ah ee lagu xusay marar badan kitaabka Quraanka ah. Ilaahay (koreeye) wuxuu Quraanka kariimka ah ku yidhi:
1 Shakhsiyada Maryama
3 Xubnaha Qoyska Cimraan
3.1 Nebi Muuse
3.2 Nebi Haaruun
4 Qaraabada Kale
4.1 Nebi Sakariye
5 Dhalida Ciise
6 Nebi Ciise
7 Kitaabka Injiil
Sida ku xusan kitaabka Quraanka kariimka ah Maryam waxay ka soo jeedaa mar ahaantaana ku abtirsataa qoyska reer Cimraan oo ah aabaha Nebi Muuse, Nebi Haaruun iyo walaashood Miryama. Sidoo kale, Maryama waxaa loogu yeedhaa "Maryam bintu Cimraan" taasi oo loola jeedo gabadhii reer Cimraan, laakiin aabaheeda saxda ah kuma xusna diinta Islaamka, laakiin diinta Masiixiyada waxay aabaheed ku sheegeen Jaawjim (Jaochim). Intaasi waxaa dheer culimada qaar waxay sheegeen in Maryama ay ka soo jeedo Nebi Haaruun oo ah wiilka Cimraan iyo walaalka Nebi Muuse iyo Miryama.
Dhinaca kale, Maryama waxaa hooyo u ah sheekhada Anna (Saint Anna) qoftaasi oo ahayd qof aad ugu wanaagsan cibaadada iyo diinta Alle.
Xubnaha Qoyska Cimraan
Miryama bintu Cimraan.
Dadka muslimiinta iyo masiixiyiintu waxa ay isku raacsan yihiin in dhalashaddiisu mucjisa ahayd oo hooyadiis Maryam ay isaga uuraysatay iyadoo bikra (cadrad) ah.
Ciise markii uu soddon jirsaday ayuu bilaabay fidinta diinta, iyo in uu u digo dadka reer bani Israaiil oo wakhtigaasi ku caasiyay amarka Ilaahay. Sadex sano ka dibna samada ayuu u kacay. Yuhuudu waxay sheegatay iney dileen laakiin Ilaahey wuu beeniyay, wuxuuna imaan doonaa Nabi Ciise (c.s) aakhiru samaanka; isla markaana wuxuuna dili doonaa beenaalaha lagu magacaabo masiixu dajjaal.
Ciise Nebi Ciise Ciise Masiixi (ingiriis: Jesus, "Jiisas"; carabi: ﻧﺒﻲ ﻋﻴﺴﻰ; "nebi Ciise"; sidoo kale: يسوع, loogu dhawaaqo "yasuuca") calayhi salaam waxa uu ahaa nebi Alle u dirsaday reer [Israaiil|[banii Israaiil]] (dadka Yuhuuda ah ee maanta deegaanka ku ah wadanka Israaiil). Sayid Ciise Masiixi waxaa Alle (s.w) ku soo dejiyay isla markaana u soo waxyooday kitaabka Injiil ee saldhiga iyo aasaaska u ah diinta Masiixiyada sidoo kale loo yaqaano diinta Kiristaanka.
Nebi Ciise (c.s) wuxuu ka mid yahay shanta Ras;uul ee Alle ku sheegay kitaabka Quraanka kariimka ee la siiyay Nebi Muxamed , waxaa Ilaahay ku soo dejiyay kitaabka Injiil ee saldhiga iyo aasaaska u ah diinta Masiixiyada in kastoo ay wax badan ka bedeleen isla markaana ay magacyo badan iyo qeeybo badan ka dhigeen.
Guud ahaan, Nebi Ciise masiixi waa nebiga labaad ee ugu dambeeyay ama lagu soo khatimay dhamaan anbiyada Alle soo diray, waxaana ka dambeeyay oo kali ah Nebi Muxamed .
Injiil Kitaabka Injiil (ingiriis: bible; carabi: ﮐﺘﺎﺏ ﻋﻴﺴﻰ; "kitaabu ciisah") waa kitaab Ilaahay ku soo dejiyay Nebi Ciise (c.s). Erayga Injiil macnihiisu waa war wanaagsan ama bishaaro. Inkasta oo mararka qaarkood Axdiga Cusub lagu magcaabo Injiil, haddana waxaa si gaar ah eraygan loogu yeeraa mid walba oo ka mid ah afarta qoraal ee ugu horreeya Axdiga Cusub oo kala ah Mateeyos, Maarkos, Luuqa, iyo Yooxannaa.
↑ "inta jeer ee kitaabka Quraanka lagu xusay Maryama way ka badan tahay inta jeer ay ku dhex-jirto Kitaabka Injiileed ee lagu soo dejiyay wiilkeeda Nebi Ciise Masiixi"
↑ "Baytulaxam oo ku taal dhulka ay Falastiiniyiintu degaan sanado badan ka hor bilowgii taariikhda miilaadiga"
↑ "qoyska reer Cimraan"
↑ "soddon jirsaday ayuu bilaabay fidinta diinta, iyo in uu u digo dadka reer bani Israaiil"
↑ "Sadex sano ka dibna samada ayuu u kacay"
↑ "ingiriis: Jesus, "Jiisas"; carabi: ﻧﺒﻲ ﻋﻴﺴﻰ; "nebi Ciise"; sidoo kale: يسوع, loogu dhawaaqo "yasuuca""
↑ "Sayid Ciise Masiixi waxaa Alle (s.w) ku soo dejiyay diinta Masiixiyad"
↑ "diinta Masiixiyada sidoo kale loo yaqaano diinta Kiristaanka"
↑ "kitaabka Quraanka kariimka ee la siiyay Nebi Muxamed "
↑ "Nebi Ciise masiixi waa nebiga labaad ee ugu dambeeyay anbiyada Alle"
↑ Injiil Kitaabka Injiil
↑ ingiriis: bible; carabi: ﮐﺘﺎﺏ ﻋﻴﺴﻰ; "kitaabu ciisah"
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Maryam&oldid=222902"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 3 Nofeembar 2021, marka ee eheed 06:26.